Mee Twitter, YouTube, Vimeo, Flickr, Countdown, ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ
Monday, July 2, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Wijetị na-elelị ngwa ndị nwere ike ịme ka itinye aka. Teknụzụ, wijetị bụ obere ma ọ bụ ngwa micro nke enwere ike itinye n'ime ibe weebụ. Otutu elekere, ngụda oge, na ozi ndị ọzọ siri ike na ibe weebụ bụ wijetị n'ezie. Na saịtị anyị, ị ga - ahụ ole na ole - ederede kacha elu, Twitter, Podcast na Facebook ederede aro.
Wijetị na-enye ohere ịgbanwere ozi ndị na-adịghị mma na nnọkọ mmekọrịta, nke nwere ike ịdọta mmasị ndị ọbịa websaịtị. Dịka ọmụmaatụ, wijetị nghoputa na-eduga onye ọbịa na ntuli aka emere na weebụsaịtị, wijetị Facebook nwere ike iduga na ibe mmadụ nke ika ahụ. Wijetị na-enyekwa mkpokọta akụkọ, na-enye ya ike maka ime mkpebi nyocha.
Ihe mgbochi kasịnụ na wijetị n'oge gara aga bụ ịmepụta ha. WijetịBox awade ngwa ogwe aka maka ebumnuche dị iche iche. Ọ na-enye karịa wijetị 46,000, na nhọrọ nhọrọ, na-ebudata na ntanetị na ibe weebụ. Ọ na - enyekwa ndị ahịa aka imepụta wijetị nke aka ha na ntanetị ole na ole, na idetuo na mado koodu nke akpaghị aka na oghere achọrọ na koodu ibe weebụ.
Lelee nyocha nke WidgetBox:
Wijetị na - enyekwara gị aka ịmata onye jiri wijetị na ebee. Ebe ọ bụ na wijetị ọ bụla bụ capsule nke ọrụ a kapịrị ọnụ, ndị na-ere ahịa nwere ike si otú a chọpụta ọrụ a kapịrị ọnụ na-adọta ọtụtụ ndị na-ege ntị, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ chọrọ, na nyocha ndị ọzọ dị oke mkpa.
Ihe ndi ahia choro ima banyere HTML5
Jul 2, 2012 na 5:04 PM
Nke a amaka! Daalụ nke ukwuu maka nnukwu ngwá ọrụ a!
Inwe wijetị na ibe mgbasa ozi gị bụ, echere m,
dị ezigbo mkpa maka azụmahịa. Ọ bụghị na ha kwesịrị inwe wijetị maka
ihe niile na ihe obula: otutu ihe obula bu ihe ojoo. Ma
mgbe ejiri ya nke ọma, yana imeru ihe n'ókè, wijetị nwere ike ịbụ ahịa bara uru darn
ngwá ọrụ. N'ihi gịnị? N'ihi na ọ na-enye ndị ọrụ ntanetị ohere ịnweta FB gị,
Myspace, Twitter, Flicker, Youtube, wdg wdg.
Widgetbox dị ka ọ na-eme ka ọ dị mfe itinye ngwaọrụ ndị ọzọ
kwa na wijetị ha maka ntuli aka, ụdị, ihe ngosi mmịfe, wdg
ruo na ọ dị mfe ndị ọrụ gị ịmekọrịta na akara gị.
Ma, n’ihi na iji wijetị mee ka ọ dị nfe apụtaghị
ị ga-aga nke ọma. Ikwesiri igba mbọ hụ na ọdịnaya dị mma. Ama m National
Ọnọdụ na-eme nke ahụ nke ọma. Ha na-elekwasị anya na ijikọ ọdịnaya dị mma
na ala nke iji nwa oge. Ekwenyesiri m ike na ha na etinye ntinye na ngwa ha
Ya mere, anyị niile kwesịrị!